लिम्वूवान - विविध सामग्री: लिम्वुको उमेरद्वारी नेपाली गौरव र उनको प्रोफाईल
दिल पालुङवा लिम्वु नेपालकुश्शा
आगामी ६ नोभेम्वर २०११को दिन सम्पन्न हुन गईरहेको डिस्ट्रिक्ट काउन्सीलको चुनावमा जोर्डन वेस्ट क्षेत्रवाट मेजर शरण कुमार लिम्वुले उमेरद्वारी दिनु भएको छ । नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाले सौदर्न डेमोक्रेटिकको तर्फवाट उमेरद्वारी दिएता पनि उनी स्वतन्त्र प्रकारका व्यक्ति हुनुहुन्छ । आज सम्मको नेपाली उमेरदवारहरुमा उहा निकै उचाईको हुनुहुन्छ । उहाको उमेरद्वारी नेपालीहरुले पाउनु पनि गौरवको कुरा हो । नेपालीहरुको घना वसोवास भएको जोर्डनवाट उमेरद्वारी हुदा सवै नेपालीहरुले भोट दिएमा जित्ने पक्का देखिन्छ । तर कतिपय नेपालीहरुले भोटमा नाम दर्ता गराएका छैनन् । यसरी नेपाली समाजमा त्यति नदेखिएका मे. लिम्वुको वारेमा केही टिप्पणी गर्न अवश्य सान्दर्भिक हुनेछ ।
मे. लिम्वु पूर्वी नेपाल हाल लिम्वुवानले वढी परिचित लिम्वुवानको मेची अञ्चल ताप्लेजुङ जिल्लाको भर्खर निर्मित ताप्लेजुङ नगरपालिका वार्ड नं. २ सिम्लेको पालुङवा लिम्वु परिवारमा वावा चतुरमान पालुङवा र आमा सञ्चमति ताप्मादेन लिम्वुको कोखवाट सन् १९५१ मा जन्म भएको हो । युवा उमेरमा नै व्रिटिश गोर्खाको व्वाई भर्ति भएर मलेसिया जानु भएको थियो । तिक्ष्ण वुद्धिका कारण उहाले पल्टन मै अध्ययन गरेर व्याच्लर(वि.ए.) पुरा गरेका थिए । उहाको अंग्रेजी हङकङमा रहेका नेपालीहरुमा अव्वल दर्जामा आउदछ । उहा सन् १९८२ मा हङकङवाट फक्ल्याण्ड युद्धमा गई विजय प्राप्त गर्नु भएको थियो । उहा पल्टनमा ७ जिआरमा हुनुहुन्थ्यो । उहा पल्टनको फुटवल टिममा क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो । राम्रो काम गरेकोले उहा गोर्खा मेजरसम्म हुनु भयो । अझै सम्मान गर्दै जि.सि.ओ.को पद पनि दिईयो । तर्सथ मेजर जि.सि.ओ.भनेर उहालाई सम्वोधन गरिन्छ ।
सन् १९९८ मा २९ वर्षमा सेवापछि उहा रिटायर्ड हुनु भयो । शिक्षा सेवी उहाले काठमाण्डौमा साथीहरुसंग मिलेर एउटा वोर्डिङ पनि सञ्चालन गर्नु भएको थियो । जागिरको क्रममा हङकङमा एडभेञ्चर कप्समा मुख्य ट्रेनरको रुपमा काम गरी हङकङको विभिन्न विद्यालय, र्इमिग्रेशन अफिसर्स आदि अफिसर्सहरुलाई ट्रेनिङ दिई नेपालीत्वको आफ्नो परिचय दिनुभएको छ ।
उहां समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ । उहां पालुङवा समाज हङकङको सल्लाहकार, गोर्खाज सेक्युरिटी युनियनको सल्लाहकार हुनुहुन्छ । उहाले स्वयमसेवीको रुपमा धेरै जनाकोर् इम्रि्रेसन, व्रिटिश कन्सुलेट, हस्पिटल आदिमा सहयोगीको काम गर्नु भएको छ । नेपाली भाषामा भन्दा अंग्रेजीमा राम्रो भाषण दिने क्षमता भएको उहां चाईनिज भाषामा पनि ज्ञान राख्नु हुन्छ । उहाले चुम्लुङ लगाय धेरै संस्थाहरुवाट सम्मान पनि पाई सक्नु भएको छ । उहाको एक छोरा मेडिकल डाक्टर छन् भने दुइ छोरी हङकङ मै वसोवास गर्दै आएकाछन् ।
नेपालीहरुको लागि केही गर्नु पर्छ भन्ने त्रि्र मनशाय भएका उहाको स्वार्थीपन, चाप्लुसीपन पटक्कै छैन । पल्टनमा पनि आफ्नै क्षमताले उच्चपदमा पुग्नु भएको उहा नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद,स्वार्थवादको घोर विरोधी हुनुहुन्छ ।
यस पालीको चुनाव जितेमा उहाले नेपालीहरुको लागि धेरै कामहरु गर्ने सोच राख्नु भएको छ । उहाले हङकङेली एथ्निक माईनोरिटीहरुको विषयमा पनि कुराहरु उठान गर्नु हुनेछ । उहाको नाराहरु, योजनाहरु यस प्रकार रहेका छन् -
१) नेपालीहरुलाई लगायत अन्य अल्पसंख्यकहरुलाई सर्वसुलभ तरिकाले हाउजिङ प्रदान गर्न पहल गर्ने ।
२)र्इमिग्रेशन, हस्पिटल आदिमा दोभाषेको सरल व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
३) एथ्निक माईनोरिटीको विद्यार्थीलाई युनिभर्सिटिको अध्ययन सहज गरिनु पर्ने ।
४) नेपाली कम्यूनिटीको हलको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५)वृद्धवृद्धाहरुलाई वृद्धाश्रम तथा अस्पताल आवत जावत तथा मेडिकल सम्वन्धमा सर्वसुलभ व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने ।
६) कुलतमा लागेकाहरुको उद्धार कार्य गर्ने आदि सान्दर्भिक विषयवस्तुहरु राखेका छन् ।
अन्त्यमा उहा हाम्रो उमेरदवार हुनुहुन्छ । हङकङवासी नेपालीहरुले सम्वन्धित क्षेत्रमा छौं भने उहालाई भोट दिऔं । क्षेत्र वाहिर भएमा पनि सम्वन्धित क्षेत्रमा वस्ने आफन्तहरुलाई, साथीभाईहरुलाई भनेर मतदान गराऔं । उहाको विजय हामी सवै नेपालीहरुको विजय हो । सेवारो ।
Posted by limbu at 7:57 AM